Sawirro: Haddii Hooyadu Hagaagto Jiilka Mustaqbalka Ayaa Hagaaga. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Sawirro: Haddii Hooyadu Hagaagto Jiilka Mustaqbalka Ayaa Hagaaga.
On Jul 21, 2018 197 0
Haweenka oo lagu fasaadiyo iney xijaabka sharciga ah iska tuuraan kuna milmaan ragga, islamarkaana ka qeyb qaataan ciyaaraha, heesaha iyo wax yaabaha lamidka ah waa qeyb kamid ah duullaanka adag ee lagu hayo muslimiinta caalamka.
Haweenku waa tiir dhaxaadka bulshada, marna waxaa la yiraahdaa waa warshadda soo saareysa jiilka mustaqbalka, sidaa darteed haddii warshaddaasi qarribanto waxay soo saareysaa ubad qarriban, haddey hagaagsan tahayna waxay soo saareysaa oo tarbiyeeneysaa ubad ahlu diin ah.
Alle mahaddi, dalkeena Soomaaliya waxa uu kamid yahay wadamada sida wacan looga qaato xijaabka, inkastoo waayihii dambe dumarka muxajabaadka ah lagula dagaalamayay magaalooyinka ay ciidamada shisheeye qabsadeen.
Xijaabku wuxuu hagaajinayaa muuqaalka kore ee gabadha waana cibaado, laakiin arrinta kale ee muhiimka ah ayaa waxay tahay in gabadhu noqoto mid garanaysa diinteeda si ay u kala garato xaqa iyo baadilka, fursadna ugu hesho iney berri caruurteeda ku kormeerto duruusta dugsiga iyo iskuulka.
Markaad eegto wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaad ka dareemeysaa in dumarku kaalin fiican ku leeyihiin wax barashada, waxaadna arkeysaa qaar aad u da’yar oo bartay Qur’aanka iyo tafsiirkiisa, sunanta iyo saxiixeynka.
Arrintan sida gaarka ah ii soo jiidatay oo igu kalliftay qormadan guud marka ah ee kooban ayaa waxay tahay in aan markii ugu horreysay wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool, ku arkay machad u gaar ah gabdhaha oo kaliya, kan oo ka wanaagsan kuwa ay wada dhigtaan ragga iyo dumarka.
Gabdhaha ayaa machadka soo gala aroortii hore waxayna ka laabtaan maqribkii, halkaasoo ay maalintii ku qaataan cunnadooda iyo wax barashadooda, iyadoo ay macallimiintoodu u badan yihiin haween kale oo aqoon yahano ah.
Mar aan tagay machadkan wuxuu maamulku ii sheegay in loogu tala galay muddo sadax sannadood ah. Hadda waxay ardaydu dhameysteen lixdii bilood ee ugu horreysa waxaana aad ii soo jiitay in ardaydu muddadan kooban ku xifdiyeen inta badan Mutuunta sharciga ah.
Haddaba haddii dumarku helaan fursadahan oo kale, ayaa waxaa hubaal ah in ummadan mustaqbalkeedu hagaagayo, soona baxayaan jiil tarbiyeysan oo ay hooyo suubani kusoo anqarisay Towxiidka.